दसैंमा कत्राे टीभी ल्याउनुभयाे ? पैसा लाग्ला नि ! | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← क्षमा माग्दै थरुहट्वारा दाङमा बन्द हड्ताल फिर्ता
भारतको झन् दबाब →
दसैंमा कत्राे टीभी ल्याउनुभयाे ? पैसा लाग्ला नि !
विदेशबाट ठूलाे टीभी ल्याउनेले १७ देखि ३५ हजार तिर्नुपर्ने
१८ असोज, काठमाडौं । दसैं नजिकिँनै लाग्दा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेशबाट फर्किनेहरु बाक्लिन थालेका छन् । सोमबार विमानस्थलमा पुग्दा विदेशबाट दसैं मनाउन स्वदेश आउने धेरै नेपालीहरुका साथमा ठूलो सुटकेश ब्यागसहित एलइडी टेलिभिजन देखिन्थ्यो ।
पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीबाट घर फर्किंदा आफुलाई मनपर्ने टीभी बोकेर आउनेहरुकाे संख्या बढ्न थालेकाे छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई ३२ इञ्चसम्मको टिभी ल्याउँदा भन्सार तिर्न नपर्ने व्यवस्था गरेपछि धेरैजसोले फर्किंदा टिभी ल्याउन थालेका हुन् ।
तर, भन्सार छुटमा टिभी ल्याउन रोजगारीमा गएको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिरकुमार ढुंगानाले बताए ।
‘विदेशबाट फर्किने सबैलाई टिभीमा भन्सार छुट दिइँदैन, विदेशमा रोजगारी गर्न गएकाले मात्र यस्तो छुट सुविधा पाउँछन्’ महानिर्देशक ढुंगानाले भने- ‘छुट प्राप्त गर्नका लागि वैदेशिक रोजगारीमा गएको एक वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ ।’
बैदेशिक राेजगारीमा गएकाहरूले ३२ इञ्चसम्मकाे टीभी ल्याउँदा शुल्क नलागे पनि साेभन्दा ठूलाे टीभी बाेकेर अाउने नेपाली कामदारहरूसँग सरकारले ढाड सेकिने गरी कर उठाउने गरेकाे छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई राहतस्वरुप ३२ इञ्चसम्मको टिभी ल्याउँदा भन्सार छुट दिन थालेको हो । यसरी टीभी बोकेर आउनेहरुमा अधिकांश मलेसिया, कोरिया तथा खाडी मुलुकमा गएका कामदारहरु हुने गरेको महानिर्देशक ढुंगानाले बताए । उनका अनुसार विदेशबाट ३२ इञ्चको टिभी ल्याउने बढी हुन्छन् ।
कतिपयले ६५ इञ्चसम्मका पनि टिभी ल्याउने गर्छन् । ६५ इञ्चको टिभी नेपालमा ल्याउँदा ३५ हजार ७५० रुपैयाँ भन्सार बुझाउनुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएर एक वर्ष पूरा नहुँदै फर्किने कामदारले पनि भन्सार छुट नपाउने ढुंगाना बताउँछन् । उनका अनुसार विदेशमा पढ्न गएका वा उतै बसोबास गर्नेहरुले पनि यस्तो छुट पाउँदैनन् ।
सरकारले ३२ इञ्चसम्मको टिभीमा मात्र भन्सार छुट दिन्छ । तर, त्योभन्दा माथिको टीभी ल्याउँदा कामदारले पनि प्रतिइञ्च ५५० रुपैयाँको दरले भन्सार बुझाउनुपर्ने महानिर्देशक ढुंगानाले जानकारी दिए । पढाइ तथा अन्य कामको शिलशिलामा विदेश गएका नेपालीले टीभी ल्याउँदा सबै साइजमा प्रतिइञ्च ५५० रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ ।
अन्य शिलशिलामा विदेश गएका नेपालीले ३२ इञ्च भन्दा ठूलाे टेलिभिजन ल्याउँदा सरकारलार्इ १७ हजार ६ सय रुपैयाँ भन्सार बुझाउनुपर्छ ।(अन्लाईनखबर )